ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်မျိုးဆက်များရဲ့ မိတ်ဆက်လက်ဖက်ရည်ပွဲ | MoeMaKa Burmese News & Media
ဖေဖော်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၁၂
ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များရဲ့ မိတ်ဆက်လက်ဖက်ရည်ပွဲကို ဒီနေ့နေ့လည်ပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့ တောင်ဥက္ကလာပ၊ မြစ်သာရပ်၊ သံသုမာ လမ်းနဲ့ ရတနာလမ်းထောင့် လိုင်စင်ရုံးအနီးက စိတ်တိုင်းကျ စားရိပ်မြုံ ဒုတိယထပ်မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
Magin sayardaw, Ko min Ko naing, Dr. zaw min, U hla shwe
Ma zin mar aung ………………. U hla saw
Ko took ki & Ko mya aye …… ….Kyaw ko ko & Ko zeya
Ko si thu mg …………………….. Ma nobel aye
အခမ်းအနားမှူးအဖြစ် မဇင်မာအောင်က ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်မျိုးဆက်အသီးသီးမှ လူတစ်ရာကျော်ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ ပါတယ်။ အခမ်းအနားမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးအဆက်ဆက်မှာ ကျဆုံးခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များကို ဦးညွှတ်လေးစားအောက်မေ့ခြင်းအားဖြင့် တစ်မိနစ်ငြိမ်သက်ခဲ့ကြပြီး၊ ၆၂ ခုနှစ် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးလှရွှေမှ အဖွင့်အမှာစကားချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။
၇၄ – ၇၅ – ၇၆ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်မျိုးဆက်များမှ ဦးလှစော၊ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြတဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး၊ ကိုမြအေး၊ ၉၆ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များဖြစ်တဲ့ မနိုဘယ်အေး၊ ၂၀၀၇ ဗကသမျိုးဆက်များကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုစည်သူမောင်တို့က အမှစကားအသီးသီးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အခမ်းအနားရဲ့ နိဂုံးချုပ်အမှာစကားကို ၆၂ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးလှရွှေက ပြောကြားခဲ့ပြီး တက်ရောက်လာကြသူများကို လက်ဖက်ရည်၊ မုန့်များနဲ့ဧည့်ခံကာ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မျိုးဆက်များရဲ့ မိတ်ဆက်လက်ဖက်ရည်ပွဲကို အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
U hla shwe speech
2 Responses to ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်မျိုးဆက်များရဲ့ မိတ်ဆက်လက်ဖက်ရည်ပွဲ
ံHopeHope on February 9, 2012 at 1:51 pm
ကျေဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ကိုယ့်ရဲဘော်ဟောင်း သစ်တွေကို တွေ့ ရတာ။ အဝေးကပဲ ဖြစ်ပေမဲ့ ကိုယ်ကိုတိုင် ၀င်ရောက်ပါဝင်နေသလိုမျိုးခံစားရပါတယ်။
Thiri Nandar on February 9, 2012 at 4:16 pm
In U Hla Shwe’s speech, he said:
“In 1939, Pha-Sa-Pa-La expelled A-Loke-Tha-Ma Lu-Dan-Sa Party”.
As far as I know, it was the Communist Party that was expelled from Pha-Sa-Pa-La. Are they same? If they are the same, why did U Hla Shwe try to disguiseahistorical fact?